Kaominina any Frantsa - Wikipedia
Any Frantsa, ny kaominina dia fizarana administrativa, ny fizaram-paritany kely indrindra any Frantsa. Ny kaominina dia tan'ny tanàna na vohitra. Ny velarantaniny dia mety miovaova be mihintsy (ny kaominina ngeza indrindra any Frantsa dia Paris : manana isam-ponina roa tapitrisa, ary ny kaominina kely isam-ponina indrindra tsy tsy misy olona)
Tamin'ny 1 Martsa 2008, misy kaominina 36 783 any Frantsa (212 any ampitan-dranomasina) maka ny tontalin'ny firenena frantsay - afats'i Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna sy ny tany tsy misy olona (Antarktika frantsay, nosy Clipperton).
Tamin'ny 1 Janoary 2009, nisy kaominina 36 686 any Frantsa 
Io isa io (36 783) dia antsasan'ny isa tontalin'ny kaominina anatin'ny Eoropa 15.
Na dia misy difference be aza ny isam-ponin'ny kaominina frantsay, mitovy daholo ny structure administrativany sy ny fahefana ara-dalànany (afats'i Paris, Lyon sy Marseille, amban'ny lalàna PLM). Ny kaominin'ny Alsace-Moselle dia manana ny mahasamihafa araka ny lalàna azony tamin'izy lasa Alemana tamin'ny taona 1871-1919. Ny kaominina sy ny departementan' Île-de-France dia manana fitsipika manokana ho azy momban'ny polisy administrativa.
Ny kaominina dia voarindran'ny conseil Municipal, ny mpikamban'io conseil io dia lany amin'ny alalan'ny suffrage universel direct ho an'ny enin-taona ho avy. Ny conseil municipal dia misafidy ny ben'ny tanàna, ny zaraasany dia mampihatra ny fanapahan-kevitry ny conseil.
((fr)) L'actualité des communes de France
((fr)) Réseau des communes
((fr)) Recherche les communes de France avec GenCom
((fr)) Liste des 36 685 communes de France (au 1Endrika:Er janvier 2006)
((fr)) Page Collectivités locales du site du ministère des Finances et de l’Industrie (MINEFI)
((fr)) Volet législatif des compétences des communes
((fr)) Volet règlementaire des compétences des communes
((fr)) Villes et communes de France avec lescommunes.com
((fr)) Annuaire des Mairies et Institutions de France
((fr)) Annuaire Villes et Villages de France
((fr)) Répartition des communes suivant leur population par région au recensement de la population 1999 (Insee)
Limites administratives des communes d’Île-de-France Archived Febroary 14, 2008 at the Wayback Machine sur Google Earth
((fr)) Annuaire des villes et communes de France
((fr)) Guide des villes de France
↑ kopian'ny arisiva. archived from the original on 2016-03-04 Retrieved on 2009-12-06.
↑ L’analyse des comptes 2003 des communes Archived Septambra 6, 2009 at the Wayback Machine, Rapport du ministère des finances
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaominina_any_Frantsa&oldid=1036708"
Dernière modification le 28 Aogositra 2021, à 20:56
Voaova farany tamin'ny 28 Aogositra 2021 amin'ny 20:56 ity pejy ity.